ဆပ်ပြာ cream တွေရဲ့ ခဲခြစ်ကံစမ်းမဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Gossip, Rumor » ဆပ်ပြာ cream တွေရဲ့ ခဲခြစ်ကံစမ်းမဲ
ဆပ်ပြာ cream တွေရဲ့ ခဲခြစ်ကံစမ်းမဲ
Posted by etone on Jun 24, 2011 in Gossip, Rumor, Short Story | 19 comments
ပြီးခဲ့တဲ့ weekend က အိမ်မှာသုံးဖို့ လိုတာလေးတွေဝယ်ရအောင် ကျွန်မဈေးဝယ်ထွက်ခဲ့တယ်… ။ လိုချင်တာလေးတွေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံဝယ်ပြီး …. မေ့လျှော့ကျန်ခဲ့လေသော ပစ္စည်းများ မရှိရအောင် ပြန်စဉ်းစားရင်း တဖြည်းဖြည်း လမ်းလျှောက်နေလေရဲ့… ။ အကျင့်ကိုက ဈေးဝယ်ရန်လိုသော ပစ္စည်းများကို စာရွက်နဲ့ မှတ်တဲ့ အလေ့အထမရှိတာကြောင့် … ဦးနှောက်ထဲပေါ်သမျှနဲ့ …မြင်သမျှကို ချိန်ကိုက်ရင်း….. ။
လျှပ်တပြတ်ကျွန်မ သတိရလိုက်ပါတယ်… ဆပ်ပြာခရမ်ကုန်နေပြီဆိုတာကိုပေါ့ … ။ ဆပ်ပြာတန်းဘက်ကို သွားပြီး ဘယ်ဆပ်ပြာခရမ်သုံးလျှင် ကောင်းမလဲ တွေးပါတယ်…၀ယ်နေကြအမျိုးစားက ရိုးသွားပြီထင်လို့ ကျွန်မနောက်တမျိုးစားသုံးလျှင်ကောင်းမလားတွေးရင်း ဆပ်ပြာခရမ် တံဆိပ်တွေ ကိုလိုက်ကြည့်ပါတယ်….. ။ ဆိုဒ်တွေနဲ့ တံဆိပ်တွေက အစုံပေါ့ … ။ နာမည်ကြီး တံဆိပ်တွေရော … အသစ်ထွက်တဲ့ တံဆိပ်တွေရော စုံလို့ပေါ့… ။ တချို့ ဆပ်ပြာခရမ်အမျိုးစားတွေဆို ခဲခြစ်ကံစမ်းမဲလေးတောင် ပေးသေးတယ်… ။ စိန်ဂေဟာ အံပေါင်းလက်ကီးဒရော ကတည်းက ကံစမ်းမဲကို စိတ်ကုန်နေတဲ့ ကျွန်မ ၊ အခုလည်း ကံစမ်းမဲ ဆိုတာနဲ့ … စိတ်ပြန်ဝင်စားလာပြန်တယ် … ၀ါသနာကိုး….မှတ်လောက်သားလောက်အောင် လူလည်ကျခံထားတာမှ မကြာသေးဘူး … ။
ဒီတခါ ကံစမ်းမဲကတော့ ခဲခြစ်ကံစမ်းမဲပါ… ဆပ်ပြာ ခရမ်ဆိုတာကလည်း စိန်ဂေဟာလပ်ကီးဒရောတုန်းကလို နှစ်သောင်း၊သုံးသောင်းမဟုတ်ဘူးလေ… ဒီတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ၀ါသနာအရ ခဲခြစ်ကံစမ်းမဲပါတဲ့ ဆပ်ပြာခရမ်ဝယ်မယ်လို့ တွေးလိုက်ပါတယ်… ။ ခဲခြစ်ကံစမ်းမဲ ပါတဲ့ ဆပ်ပြာခရမ်အမျိုးစား နှစ်ခု သုံးခုလောက်ရှိတယ်… ဆိုဒ်ကတော့ အစုံပါပဲ … ။ စပ်စပ်စုစုနဲ့ ဘယ်အမျိုးစားကိုဝယ်လျှင် ဘယ်လောက်ရမလဲ တွေးပြီး ဆပ်ပြာဗူးလေးတွေကို ကိုင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်… … ။ အဲ့ဒီမှာ စတာပါပဲ … ။ခဲခြစ်တွေ အကုန်လုံးက ခွာထားခံရတာပါ … ။ လက်ရာတွေ ပျက်ယွင်းနေပါတယ်… ။ ကံစမ်းမဲ ကို ခွာကြည့်ပြီးမှ ပြန်ကပ်ထားပုံပါ… ။ ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်မလည်း အလျှင် အမြန် ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်လိုက်ပါတယ်….။ ကျွန်မခဲခြစ်တွေကို သေချာကြည့်နေတုန်း ကောင်မလေးတွေ ဘေးကို ရောက်လာတာနဲ့ အမျိုးစား တမျိုးကိုပဲ မှတ်တမ်းတင်လိုက်ရတာပါ…… ။ တခြား အမျိုးစားတွေကို ကြည့်တော့လည်း ဒီလိုပဲဖြစ်နေပါတယ်….. ။ ဘယ်သူတွေရဲ့ လက်ချက်လဲ ၊ ရှောပင်းစင်တာတွေက အရောင်းစာရေးမတွေရဲ့ လက်ချက်လား မဝေခွဲတတ်အောင်ပါပဲ … ။ ကံစမ်းမဲပေးပါလို့ ဈေးဝယ်သူက အတင်းတောင်းဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ကုမ္ပဏီက ရောင်းအားတတ်ချင်တဲ့အခါ လုပ်တဲ့ ပရိုမိုးမျိုးမှာ ဒီလို မသမာမှူတွေ ရှိနေတာ ဈေးဝယ်တဲ့လူကို စော်ကားတာနဲ့ တူနေပါတယ်… ။ ခဲခြစ်ကံစမ်းမဲမှာ အများစုက အတန်သေးတွေချည်းပါမယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းမိပေမဲ့ …ကလီကမာတော့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့ …. ။ တွေးကြည့်မယ်ဆိုလျှင် တကယ့်ကို ရှက်စရာကောင်းတဲ့ လုပ်ပါ ဖြတ်ခုတ်မယ်ဆိုတဲ့ အကြံမျိုးနဲ့ လက်ဆော့ထားတာမို့လို့ပါ… ဒီလောက် ဗူးတွေ အများကြီး တယောက်ထဲနဲ့တော့ ခွာကြည့်ဖို့ထက် …ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှူလို့ပဲ ကျွန်မထင်ပါတယ်… ။ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေ လာချကတည်းက ဒါမျိုး မသေမသပ်တဲ့ ခွာထားတာတွေ ပါလျှင် အရောင်းစာရေး ၊ စတိုလက်ခံသူတွေက စီစစ်ပြီး ပြန်ပြောမယ်လို့တော့ ကျွန်မထင်ပါတယ်… အခုလို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ခွာကြည့်ပြီးသားတွေကို ပြန်ရောင်းရဲတာ … အရောင်းစာရေးတွေဘက်က လောဘတတ်မှူလို့ပဲ ကျွန်မထင်ပါတယ်…။ ငွေပမာဏကတော့ မဖြစ်စလောက်လေးဆိုပေမဲ့ … ဒီလို လုပ်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပေါ်လွင်သွားတယ်ဆိုတာ … ဘယ်သူမှ မသိလည်း ၊ ကာယကံရှင် ပြုလုပ်သူတို့ ကိုယ်တိုင် သိကြပါလိမ့်မယ် ။ စိတ်ဓါတ်မြင့်မြင့် ထားနိုင်ကြပါစေနော် ။
( OKI တံဆိပ်တမျိုးထဲတင်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး ၊ တခြား တံဆိပ်တွေမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ ….ဓါတ်ပုံကတော့ အခြေနေအရ ရိုက်ရတာမို့ အမျိုးစား တခုထဲ ပုံပါလာတပါ ။ )
ဗျို့ … သဂျီး… ပထမတခါတင်တုန်းက အက်ဒစ်လုပ်လို့ မရဘူး … နောက်တခါ ထပ်တင်လိုက်တယ်… တပိုင်းကြီးဖြစ်နေလို့ … ။
ပွိုင့်လည်း တခါတင်လျှင် တခါထပ်ရလို့ ပြန်နှုတ်လိုက်ပါဗျို့ … ။
ဘယ် shopping center လဲ
နောက်အဲလိုကံစမ်းမဲတွေက မလွန်ဆုံးပါ 1000 ပါ
ငွေပမာဏ မဖြစ်စလောက်လေးနဲ့ ကိုယ့်သိက္ခာကို အပွန်းပဲ့ ခံနိုင်ကြတာပါပဲလား
သြော် ဘုံဓလေ့မှာ ကြုံတွေ့ရတာ အစုံပါလား
အော် လူတွေ လူတွေ..
ရော် …. ကြုံရပြန်ပြီကော….
ဆိုင် အမည်ကို တိုက်ရိုက်မဟုတ်တောင်မှ ခန့်မှန်းလို့ရအောင် တင်ပေးနိုင်ရင် ဆိုင်ရှင်ကအရေးယူနိုင်မှာမို့ ပိုကောင်းပါတယ်။
ဆိုင်ရှင်ပါ အလိုတူအလိုပါဖြစ်နေရင်တော့ ???
ကံစမ်းမဲ က တန်ဘိုး မများပေမယ့် တစ်ကယ်ပေးတယ် ဆိုတာ သိတဲ့သူတွေ က ကြိုတင် ကံစမ်းထားတာပေါ့ဗျာ ။ ဒီတော့ ဘယ်သူတွေ ဖြစ်နိုင်မလဲ လို့ စဉ်းစားစရာ နယ်ကျဉ်းပါတယ်
အဲဒီလိုမျိုး ကြုံခဲ့ရင်နောက်လဲများများရေးပေးပါခင်ဗျား မြန်မာတွေ အားနာတတ်တာကို အခွင့်
ကောင်းယူတဲ့သူကယူကြတယ် ။ customer ဘက်ကလဲ complaint မတက်ကြဘူး ..။
complaint ကို အကျင့်လုပ်ယူဖို့ကောင်းပါတယ် ။ အစားအသောက်ထဲဆံပင်ချည်ပါလာလည်း
ဖယ်စားလိုက်တာဘဲ ဆိုင်ရှင်ကို နဲနဲပါးပါးပြောရကောင်းမှန်းမသိကြဘူး။
ဆိုင်ပေါ်ကို ရောက်ဖို့ဆိုတာ အဆင့်ဆင့် ဖြတ်လာရတာပါ။
စက်ရုံက ထွက်တာနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ သယ်လာပြိး ဆိုင်ကို အပ်.. ဆိုင်ဝန်ထမ်းက တင်ပြီးရောင်း
လူပေါင်းများစွာ ကိုင်တွယ် ကြည့်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။
ဘယ်သူလုပ်မှန်း မသိတဲ့ အရာ ဖြစ်နေပြီ။
ဈေးဝယ်သူကလည်း ပေါက်တဲ့ ဟာလိုချင်လို့ ခွာကြည့်ထားတာ လည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။
etone ထင်တာတော့ အရောင်းစာရေးမတွေ လက်ချက်ပါပဲ … ဆပ်ပြာကုမ္ပဏီက ၀န်ထမ်းတွေက အဲ့ဒီလို လုပ်တယ်ထားဦး … ဆိုင်တွေပို့တဲ့ အခါ စတိုကိုင်တဲ့ လူဘက်က ကွန်ပလိန်းတတ်ခံရမှာပါ…. ။ သူတို့ လိုက်ပို့တဲ့ ဆိုင်တွေက နည်းမှ မနည်းတာဆိုတော့ … ဆိုင်တိုင်းက ကွန်ပလိန်းတတ်မဲ့ အလုပ်မျိုး လုပ်ရဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး …. ။ ကံစမ်းမဲ မက်နေတာနဲ့ … အလုပ်ပါပြုတ်ကိန်းမို့ပါပဲ….။ေ
ဈးဝယ်သူက ပေါက်မလားသိချင်လို့ ခွာလည်း တစ်ခု နှစ်ခုပေါ့ … ။
အခုဟာက ဗူးတိုင်းလိုလိုကို ဖြစ်နေတာပါ … ။ ကံစမ်းမဲပေးချင်လျှင် အကောင်းဆုံးကတော့ ဗူးထဲထည့်ပိတ်ထားတာပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်… ။
etone ထင်တာတော့ အရောင်းစာရေးမတွေ လက်ချက်ပါပဲ … ဆပ်ပြာကုမ္ပဏီက ၀န်ထမ်းတွေက အဲ့ဒီလို လုပ်တယ်ထားဦး … ဆိုင်တွေပို့တဲ့ အခါ စတိုကိုင်တဲ့ လူဘက်က ကွန်ပလိန်းတတ်ခံရမှာပါ…. ။ သူတို့ လိုက်ပို့တဲ့ ဆိုင်တွေက နည်းမှ မနည်းတာဆိုတော့ … ဆိုင်တိုင်းက ကွန်ပလိန်းတတ်မဲ့ အလုပ်မျိုး လုပ်ရဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး …. ။ ကံစမ်းမဲ မက်နေတာနဲ့ … အလုပ်ပါပြုတ်ကိန်းမို့ပါပဲ….။ ဈေးဝယ်သူက ပေါက်မလားသိချင်လို့ ခွာလည်း တစ်ခု နှစ်ခုပေါ့ … ။
ဒီကံစမ်းမဲထည့်မယ်ဆိုရင် အကောင်အထည်ဖော်သူမှာအင်မတန် အုံးစားပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်းစထည့်ကတည်းက ကို ၀န်ထမ်းကနုတ်ထားလိုက်တယ်။
အခု etone တွေ့တာကတော့ ဒီအရောင်းဌာနရောက်မှ တမင်ခွာထားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ကံစမ်းမဲပေါက်တော့ ဆိုင်က အမ်းပေးလိုက်ရော။
ထုတ်လုပ်တဲ့မူရင်းကုမ္ပဏီကိုလဲ သွားပြီးလဲရော ကံစမ်းမဲကာလပြီးသွားပြီဆိုပြီး ပိုက်ဆံထုတ်မပေးပါဘူး။
အဲဒီအခါမှာ ငွေစိုက်လဲပေးထားတဲ့ဆိုင်က အချောင်ခံလိုက်ရပါတယ်။
ဒီတော့လဲ အရောင်းဆိုင်တစ်ချို့က ကံစမ်းမဲတွေကို စကတည်းက ခွာထားလိုက်ပါတယ်။
တစ်ချို့ကတော့လဲ ကံစမ်းမဲကိုခွာ ပြီးဈေးလျော့ရောင်းပါတယ်။
The California Department of ConsumerAffairs (DCA)
ကယ်လီဖိုးနီးယားအစိုးရက.. အပေါ်က၀က်ဘ်ဆိုက်လုပ်ပေးထားတယ်..။ အဲဒီမှာ တိုင်ဖို့ ပြုဖို့ လုပ်နည်းဟန်ကအစ.. လိပ်စာတွေအကုန်ပါတယ်ပေါ့..။ တရားရုံးတက်ပုံလည်း ပါတယ်.။ စာမျက်နှာ ၁၃ ကိုကြည့်ပါ..။
အောက်မှာ တိုင်စာဥပမာတင်ပေးထားတယ်..။ မြန်မာပြည်အစိုးရကလည်း ဒါကိုသေသေချာချာလေ့လာပြီး ..လုပ်သင့်တယ်..။
If you haveaproblem withaproduct or
service, do not wait to complain. The first step
is to contact the business that sold the product
or performed the service. A letter to the manager
is often the most effective approach. The letter
(see sample at right) should outline the product
purchased, the problem, and the resolution you
are seeking. Keep copies of all correspondence.
If you paid for the item by credit card, you may
have the right to withhold payment. Check with
the bank or financial institution that issued your
Consumer Complaint Division (if no contact person)
On (date), I (purchased, leased, rented, or had
repaired)a(name of the product, serial or model
number or service performed) at (location, date,
and other important details of the transaction).
Unfortunately, your product (or service) has not
performed well (or the service was inadequate)
because (state the problem). I am disappointed
because (explain the problem; for example, the
product does not work properly, the service was
not performed correctly, I was billed the wrong
amount, something was not disclosed clearly or
was misrepresented, etc.).
To resolve the problem, I would appreciate (state
the specific action you want – money back, credit
on bank card, exchange, etc.).
I look forward to your reply andaresolution of this
problem. I will wait until (setatime limit) before
seeking help fromaconsumer protection agency
or the Better Business Bureau. Please contact me
at the address or phone number on this letter.
အိတုန်ရယ် .. သူတို့ခမျာမှာ ဆပ်ပြာကို အလကားသုံးရမလားလို့ ကြံစည်မိပါတယ် .. ဘာလို့ ဖော်ထုတ်ရတာလဲ .. (နောက်တာ)
လူနဲ့ မူ အကြောင်းမှာ မန်းထားပြီးလို့ ထပ်မရေးတော့ပါ ..
Dr.ရေ … ဒီခေတ်မှာ အလကားရတဲ့ဟာရယ်လို့က ခပ်ရှားရှားလေ … ။
အခုလိုစိတ်ဓါတ်က အချောင်စိတ်ဓါတ်လို့ ခေါ်မလားပဲ ….. တန်ဖိုးတော့မရှိပေမဲ့ … ဘယ်သူမှ မသိအောင် လုပ်တဲ့ ကိုယ့်လုပ်ရပ် နဲ့ စိတ်ဓါတ်က ဘယ်လောက်ထိုးကျသွားလဲဆိုတာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်စေချင်တာရယ်… ၊ ဆိုင်တာဝန်ရှိသူတွေ ဂရုစိုက်မှူ အားနည်းနေတာရယ်တွေကို ဝေဖန်ထောက်ပြတဲ့ သဘောနဲ့ တင်ပေးထားတာပါ ။ ဘာမှ တန်ဖိုးအများကြီးမရှိတဲ့ ပစ္စည်းအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ နိမ့်ကျနေလွန်းလို့ ပြင်စေချင်ယုံလေးပါ … ။
၁။ ကံစမ်းမဲပါသော ပစ္စည်းများကို စင်ပေါ်သို့ အတင်အချ အသွင်းအထုတ်ပြုလုပ်ရာတွင် လက်နှင့်ထိခိုက်မိ၍ ပွန်းပဲ့ဆေးသားများ ပျက်သွားခြင်း..
၂။ သိုလှောင်ရုံ၊ လမ်းခရီး စသည်များတွင် ကြွက်၊ ခြင်၊ ယင်တို့၏ ကိုက်ဖျက်ဆီးမှုခံရခြင်း..
၃။ သဘယဝလေ၊ အဲယားကွန်းလေ တိုက်စားခံရခြင်း..
၄။ စက်ရုံမှ ထုတ်ကထဲက ခဲဆေးသားအကာ မလုံလောက်ခြင်း….
၅။ ဝယ်သူစိတ်ပြောင်း၍ ပြန်လာသောပစ္စည်းများတွင် ဖြစ်လေ့ရှိခြင်း..
၆။ ကံစမ်းမဲဖြစ်သည့်အားလျှော်စွာ ဝယ်သူမပင်ပန်းစေရန် ဗလာမဲအစား ခဲသားများ ဖျက်ထားပေးခြင်း…
စသဖြင့် စသဖြင့်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ကောင်းတာက တော့ဆိုင်ကတာဝန် ရှိတဲ့လူကို နေရာမှာတခါ တည်း complain လုပ်ခဲ့ဖို့ကောင်းတယ် ။ သူတို့ကောင်းဖို့အတွက်ပဲ၊ ပြုပြင်လို့ရအောင်လေ ။ ဒါမှမ ပြင်ဘူး ၊ စောဒကတက် မယ်ဆို ရင်၊ကိစ္စကြီးသေးလိုက် Consumer’s foundation လိုအဖွဲ့အစည်းကို့တိုင်မယ်တို့ဒီမှာကတော့လုပ်ကြတယ်။ Consumer’s foundation ကိုရောက်ပြီဆိုမှဖြင့် TV မှာပါပြီပေါ့ ။ ဒီအဖွဲ့ ကိုဒီမှာစားသုံးသူတွေသိတ် အားကိုး ကြတယ် ။ အများ အားဖြင့်တော့ complaint တွေကိုကျေနပ်အောင် အောက်ခြေမှာတင် ဖြေရှင်းပေး ပါတယ် ။ Consumer’s foundation လိုစားသုံးသူဖက်က ရပ်တည် ပေးမဲ့အဖွဲ့မျိုးရှိသင့်တယ် ။